Afaka Hiroborobo Ao Afrika Ve ny Fanatanjahantena Matianina? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jona 2017 16:48 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, عربي, Português, Español, 繁體中文, Français
Luol Deng ao amin'ny Chicago Bulls, wikimedia CC-license-2.0
Luol Deng dia mpilalao baskety, malaza sy manankarena. Nilalao tamin'ireo tarika malazan'ny NBA izy: ny Bulls ao Chicago, ny Lakers ao Los Angeles, ny Cavaliers ao Cleveland ary ny Heat ao Miami. Avy any Sodàna Atsimo ihany koa i Deng, firenena iray itambesaran'ny fahantràna sy ireo vokatry ny ady an-trano tsy ela akory izay. Tafiditra be tamin'ny fampihenana ny fifandirana sy ny fandrosoan'ny dingana ho amin'ny fandriampahalemana tao amin'ny firenena nahaterahany izy, tamin'ny alàtan'ilay ONG Enough Project. Izy ihany koa no angady nanànana ny fanorenana ireo trano fisoloana akanjo sy ireo kianja 12 filalaovana baskety ao amin'ny fireneny. Toy izao ny fanazavàny :
Izay tena mampirehareha ahy indrindra : ny nanaovako izay tratry ny heriko teny ambony sy ivelan'ny kianja, ny nanampiako ny vondrom-piarahamonina misy ahy ary ny fiainan'ny hafa.
Araka izany dia ao anatin'ilay fanatanjahantena mampamiratra azy no ahitàn'i Deng singa iray manandanja hitondra ho an'ny fahombiazana ara-toekarena ho an'ireo mpiray tanindrazana aminy. Kanefa mbola vitsy raha ny ohara momba ny fahombiazana ara-toekarena nentin'ny fanatanjahantena avo lenta tao Afrika, ary araka izany dia mipetraka ny fanontaniana raha toa ny fanatanjahantena tena afaka tokoa ho tosika ho an'ny fampandrosoana ny tanibe afrikàna..
Tsy azo lavina ny fiantraikan'ny fampitàna an-gazety ny resaka fanatanjahantena avo lenta ao amin'ny tanibe afrikàna. Arahan'ny ampahany maro amin'ny vahoaka ireny hetsika goavana ara-panatanjahantena ireny, toy ny fiadiana izay ho tompondaka erantany amin'ny baolina kitra na ireo lalao olaimpika. Sady koa ny fahombiazan'ireo firenena afrikàna tsirairay dia ankalazaina ho toy ny fandresena goavana ho an'ny tanibe iray manontolo: ohatra, ny dingana vitan'i Roger Milla sy ireo Lina Tsy Voafolaka avy ao Kamerona tany amin'ny Fiadiana ny ho tompondaka tamin'ny 1990 dia tena fambàra iray tokoa ho an'ireo afrikàna rehetra :
Na izany aza, tsy mbola mahavita mipetraka amin'ny fomba marintoerana tsara ao amin'ny tanibe ny fanatanjahantena avo lenta. Zara raha misy manaraka ireo fifaninanam-pirenena ary lasa miondrana mankany ivelany ireo mpilalao manana ny maha-izy azy. Mbola mivandravandra kokoa io ho an'ireo fanatanjahantena ho an'olon-tokana, toy ny ‘tennis’. Amin'izao andro izao, ny hany afrikàna mpilalao avy ao Afrika Andrefana nandresy tamin'ny fifanintsanana ATP dia ilay Senegaly Yahiya Doumbia, nandresy nandritra ny lalao ‘open’ natao tany Lyon tamin'ny 1988 sy tao Bordeaux tamin'ny 1995.
Ho a'ireo atleta afrikàna tanora, fanamby goavana midika fivarotana aina ny fidirana amin'ny làlan'ny fanatanjahantena avo lenta. Dia aiza ho aiza izany ny anjara toerana raisin'ny fanatanjahantena ho an'ny fampandrosoana an'i Afrika?
Ho an'ny ivontoerana Amadeus, tranon-kevitra maraokàna, mbola mila faritana io anjara toerana io:
Aty anatin'ny firenenay, tsy mbola voatrandraka araka ny tokony ho izy io halehiben'ny fanabeazana ananan'ny fanatanjahantena io. Notrandrahan'ny hetsika ara-panatanjahantena iraisampirenena ny halehibe ara-bola ananan'ny fanatanjahantena. Anjaran'ny governemanta ny miditra an-tsehatra mba hameno io fahabangàna io. Ohatra, ny firohotana amin'ny fikarakaràna ireo hetsika “goavambe” ara-panatanjahantena dia nisarika betsaka ny saina hanodidina ny hevitra hoe ny fanatanjahantena dia tena singa iray manandanja mitondra marina mankany amin'ny fampandrosoana. Kanefa, araka ny lazain'ny biraon'ny UNESCO misahana ny Tanora, ny Fanatanjahantena ary ny Fanabeazana ara-Batana, mbola mila porofoina ny fisian'ny fiantraika ho fampandrosoana entin'io karazana hetsika io.
Tsy maharitra ny ankamaroan'ny tombony azo. Mandalo mandritra ny fotoana fohy monja ny vokany eo amin'ny asa, izay mazàna dia lasa mankany amin'ireo resaben-dry zareo mpanao politika eo an-toerana, ary tsy mitondra afa-tsy ho aminà asa zara raha mila fahaizamanao. Mitondra mankaminà sondro-bidim-piainana ankapobeny ny fandraisana hetsika tahaka io, izay ireo vahoaka tena marefo no voalohany indrindra iharany. Ambonin'izany, mbola mila porofoina ny hoe tsy nitondra ho amin'ny fanilihana ny fampiasàmbola vita tao, amin'ny fanodinkodinana ny vola natao ho an'ireo sehatra hafa.
Ao Borkina Fasò, Boukari Ouédraogo, bilaogera avy ao Ouagadougou, dia resy lahatra amin'ny tombony entin'ny fanatanjahantena ho an'ny toekaren'ny fireneny :
Niteraka famoronana tsena maro midadasika ho an'ny fampitaovana ara-panatanjahantena ny fivoaran'ny fanatanjahantena aty Borkina Fasò (fanamiana, T-shirts, kiraro, fahatsiarovana isankarazany), ny fivarotana tapakila, ny fampisakafoanana, ny zo amin'ny fampitàna amin'ny fahitalavitra ireo lalao, ny fanohanana ara-bola… Misokatra kokoa ny tsenan'ny asa, na mivantana io na ankolaka. Mila olona hikarakara azy sy hanaraka akaiky azy ireo toerana filalaovana. Afaka hitondra fandrosoana ho an'ilay orinasa kely ao an-tanànan'i Bourzanga, faritanin'i Bam, mpanamboatra baolina fandàka (sy ho an'ireo taranja hafa ihany koa) ny firoboroboan'ny fanatanjahantena ao Borkina Fasò.
Richard Attias, maraokàna mpandraharaha sady filoha fahiny nitantana ny Publicis Events Worldwide dia mihevitra koa fa ny fanatanjahantena avo lenta dia mandray anjara amin'ny fampandrosoana saingy manaraka fepetra vitsivitsy:
Manana ilay mampiavaka azy manokana ny fanaovana fanatanjahantena, dia ny fahafahany mihoatra ny sisintany joegrafika sy ireo saranga sosialy. Ny fanatanjahantena dia efa sehatra iray ara-toekarena mitokana mihitsy manome ny 2% eo ho eo amin'ny harinkarena faobe any amin'ireo firenena marobe efa mandroso. Na izany aza, ny fanamby ankehitriny dia ny hanaovana ny fanatanjahantena ho singa iray manosika ny fampandrosoana ny toekarena any amin'ireo firenena tsy mbola mandroso loatra mba hisitrahan'ireo vahoaka rehetra any amin'ireny firenena ireny azy io mandritra ny fotoana maharitra.
Iombonan'ny rehetra hevitra ny filazàna hoe mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny toekarena ny fanatanjahantena amin'ny alàlan'ny famoronana asa sy fanetsehana ny raharaham-barotra. Kanefa, tato anatin'ny taona vitsivitsy, voamarika fa anatin'ny fotoana fohy no tena misy ny fiantraikan'ny tombontsoa entiny ho an'ny toekarena. Tsy mitondra tombontsoa ho an'ny fandrosoan'ireo firenena ny fikarakarana hetsika ara-panatanjahantena raha toa tsy mandrisika ny olona eo an-toerana hanao fanatanjahantena, ary raha toa ireo olona ireo ka afaka mampiasa ireny fotodrafitrasa naorina ireny aorian'ilay hetsika. Mazava loatra, ny fanatanjahantena amin'ny maha-fanatanjahantena azy dia tsy afaka hanàla ny firenena iray tsy ho ao anaty fahantràna. Fa kosa, afaka manampy ho amin'izany amin'ny alàlan'ny fitondràna fiovàna sosialy. Tsy indostria iray ny fanatanjahantena, tsy toekarena iray. Fa tokony ho singa iray mahafinaritra manosika mankany amin'ny fampandrosoana ho an'ireo firenena rehetra erantany.
Ny vahaolana azo ampiharina ho fampivadiana ny fanatanjahantena sy ny fampandrosoana dia angamba mitoetra ao anatin'izay fomba fijery ho raisina araka ny ilazan'i François Alla Yao, Talen'ny Fanatanjahantena, Sekretarià Jeneralin'ny CONFEJES (Kaonferansa iraisan'ireo Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantenan'ny ‘Francophonie’):
Raha tena ao am-pontsika marina tokoa ny hanao ny fanatanjahantena ho ampahany iray manontolo ao anatin'ny fampandrosoana sosialy, tsy maintsy miainga avy any amin'ny fototra izany, any amin'ny isam-bohitra. Isan'ireo fahombiazany ny fisian'ireo vehivavy hatramin'ny 25% mampiasa ireny fotodrafitrasa ireny, izay sambany teo amin'ny fiainan-dry zareo no manao fanatanjahantena isanandro. Ny fanaovana izay hisian'ny fiantraikany amin'ny fiainana andavanandron'ny olona no angamba fomba tena mivantana indrindra, azo tanterahana ary mahomby hanaovana ny fanatanjahantena ho tena singa iray tena mitondra mankany amin'ny fampandrosoana sosialy.